သရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းနှင့် ကောင်းကျိုးများ | မေတ္တာရိပ်
← ၃၁ ဘုံ
မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် →
သရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းနှင့် ကောင်းကျိုးများ	Posted on September 5, 2009	by mettayate “ကံ ကံ၏ အကျိုးပေးမှု”တွေနှင့် တကွ ဥပမာဖြင့် မတင်ပြခင်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ရတနာသုံးပါးအကြောင်း၊ ဆောက်တည်ခြင်းနှင့် ကောင်းကျိုးများ၊ ညှိုးနွမ်းခြင်း၊ ပျက်ခြင်း စသည်တို့ကို အရေးတကြီးသိဖို့ လိုအပ်ပြီး ယခုခေတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဟာ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ များပြီး သရဏဂုံလည်း အင်မတန်ညှိုးနွမ်းခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းများဖြစ်ရခြင်းမှာ သရဏဂုံ၏ဂုဏ်သတ္တိကို မသိခြင်းမှာ အဓိကအကြောင်းရပ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့် သရဏဂုံတည်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း၊ မိရိုးဖလာနှင့် တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ လက္ခဏာရပ်များနှင့်တကွ ရုပ်ပွားတော်ပူဇော်ရခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို အရင်ဆုံးတင်ပြချင်ပါတယ်။
( အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ ရေးသားအမည်ထွင်သော – သရဏဂုံအစွမ်းအံ့မခန်းစာအုပ်၊ မိရိုးဖလာနှင့် တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာစာအုပ်၊ မျက်ရည်မကျခင် သိစေချင်၊ အရှူံးမရှိသော ဒဿနစာအုပ်၊ များတွင် သရဏဂုံအစွမ်းကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမက ဘာသာခြားအမျိုးသားတစ်ယောက်ပါ မကောင်းဆိုးဝါးဘေးမှ အသက်လွတ်မြောက်ပုံ၊ သရဏဂုံအစွမ်းကြောင့် လူသာမက တိရစ္တာန်တွေတောင် နတ်ပြည်ရောက်ရပုံ၊ နှင့် သရဏဂမနိယထေရ်ဟာ ဘ၀တစ်ခုတုန်းက မျက်မမြင်မိဘနှစ်ပါးကိုကျွေးမွေးပြီးသရဏဂုံတစ်ဘ၀မြဲခဲ့ပြီး စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုဘ၀အဆက်ဆက်ခံစားပြီး ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ မဟာသာလသူဋ္ဌေးအမျိုးနွယ်မှာလာဖြစ်ရပြီး တစ်နေ့၌ သူ၏သူငယ်ချင်းများနှင့် ကစားနေစဉ် မထေရ်တစ်ပါးထံမှာ သရဏဂုံတည်ပြီး ၇ နှစ်အရွယ်မှာပင် ကိလေသာအာသဝေါကုန်ခန်းပြီး ရဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း စသည်ဖြင့်။ အကျယ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါစာအုပ်များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
တခြားဘာသာတွေမှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က ဒီဘာသာကို ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ဘာသာဝင်ဖြစ်ကြောင်း အခမ်းအနားတွေနဲ့ ကျင်းပကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရော ရှိလားလို့မေးရင် ရှိတယ်လို့ပဲ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သရဏံဂုံ ၃ ပါးကို ဆောက်တည်ခြင်းပါပဲ။ ဆောက်တည်မယ့်လူရဲ့လိုအပ်ချက် ၂ ချက်ရှိပြီး သရဏဂုံ ဆောက်တည်နည်းက ၄မျိုး ရှိပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်သန်ရာကို ရွေးပြီးတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
“သရဏဂမန” ပါဠိမှ ဆင်းသက်လာသော သရဏဂုံသုံးပါး သည် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ဝင်ရာ တံခါးပေါက်ကြီးတစ်ခုသဖွယ် အင်မတန်အရေးကြီးလှပါသည်။
ဘုရား တရား သံဃာဟုဆိုသော ရတနာသုံးပါးကို မသိနားမလည်ဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေ။
သရဏဂုံ ဆောက်တည်နည်း ၄ နည်း
၁) အဇ္ဇ အာဒိံကတွာ အဟံ အတ္တာနံ ဗုဒ္ဓဿ နိယျာ တေမိ၊ ဓမ္မဿ နိယျာ တေမိ၊ ဓမ္မဿ နိလျာတေမိ၊ သံဃဿ နိယျာတေမိ။
ယနေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည် မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို မြတ်ဘုရားအား၊ မြတ်တရားအား၊ မြတ်သံဃာအား အပ်နှင်းလှူဒါန်းပါ၏ ဟူ၍ဖြစ်စေ၊
၂) အတ္တ သန္နိယျာတန သရဏဂုံ– မိမိကိုယ်ကို ရတနာသုံးပါးသို့ အပ်နှင်းကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း
ဇီဝိတ ပရိယန္တိကံ ဗုဒ္ဒံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ (အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် မြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါ၏ )
ဇီဝိတ ပရိယနံ္တဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမီ (အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် တရားကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါ၏။ )
ဇီဝိတ ပရိယနံ္တသံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမီ (အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် သံဃာတော် အရှင်မြတ်တို့ကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါ၏။)
အဇ္ဇအာဒိံကတွာ အဟံ ဗုဒ္ဓပရာယဏော၊ ဓမ္မပရာယဏော၊ သံဃ ပရာယဏောတိ မံ ဓာရေထ။
ယနေ့ကစ၍ ကျွန်ုပ်သည် မြတ်ဘုရားသာလျှင် မြတ်တရားသာလျှင် မြတ်သံဃာလျှင် လဲလျောင်းရာရှိ၏ ဟူ၍ ကျွန်ုပ်ကို မှတ်ကြကုန်လော့ဟူ၍ လျှောက်ထားဆောက်တည်ခြင်း။
၃) သိဿဘာဝူပ ဂမန သရဏဂုံ
အဇ္ဇ အာဒိံကတွာ အဟံ ဗုဒ္ဓဿ အန္တေ၀ါသိကော၊ ဓမ္မဿ အန္တေ၀ါသိကော၊ သံဃဿ အန္တေ၀ါသိကောတိ မံဓာရေတေ။
ယနေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည် မြတ်ဘုရား၏တပည့်၊ မြတ်တရား၏ တပည့်၊ မြတ်သံဃာ၏ တပည့်ဟူ၍ ကျွန်ုပ်ကို မှတ်တော်မူကြကုန်လောဟူ၍ တပည့်အဖြစ် ခံယူဆောက်တည်ခြင်း။
၄) ပဏိပါတ သရဏဂုံ
အဇ္ဇ အာဒိံကတွာ အဟံ အဘိဝါဒနပစ္စုပဋ္ဌာနံ အဉ္စလီ ကမ္မသာ မိစိကမ္မံ ဗုဒ္ဓါဒီနံယေ၀ တိဏ္ဏံ့ ၀တ္ထူနံ ကရောမီတိ မံဓာရေသ။
ယနေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်ကို ရတနာသုံးပါးအား ရှိခိုးခြင်း၊ ခရီးဦးကြိုခြင်း၊ လွန်စွာအရိုအသေပြုခြင်းရှိတဲ့သူဟု မှတ်ကြကုန်လောဟု လျှောက်ထား၍ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း။
ခေတ္တ = ရတနာသုံးပါး ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ထင်ရှားခြင်း။
အဇ္ဈာသယ = ထက်သန်သော သဒ္ဓါဖြင့် ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်း။
ဤအင်္ဂါနှစ်ချက်နှင့် ပြည့်စုံပြီး ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်လျှင် ယခုဘ၀မှာပင် ကောင်းကျိုးပေးသည်။ ရတနာသုံးပါးကိုးကွယ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာအများစု ယခုဘ၀ကောင်းကျိုးမရကြသည်မှာ အဇ္ဈာသယ( ရတနာသုံးပါးမှတပါး အရုပ်မျိုးစုံရှိနေခြင်း သည်) အင်္ဂါပျက်ယွင်းသောကြောင့်တည်း။
၁) ဘယ– တွေ့ကြုံရမည့် ဘေးမှန်သမျှကို ပယ်ဖျောက်ပေးတယ်။ (မှတ်ချက်။ ရတနာသုံးပါးက တိုက်ရိုက်ပယ်ဖျောက်ပေးခြင်းမဟုတ်။ ရတနားသုံးပါး၏ ဂုဏ်သတ္တိကို ယုံကြည်သော သဒ္ဓါနှင့် ရတနာသုံးပါးသာလျှင် အားကိုးရာပဲ တခြားအားကိုးရာမရှိဟု ဆုံးဖြတ်သော သမ္မာဒိဋ္ဌိကြောင့် ပင် ဖြစ်ပါသည်။) တစ်နည်း ရတနာသုံးပါးကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကမှ ဒုက္ခပေး၍ မရနိုင်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ရတနာသုံးပါးကိန်းဝပ်သူကိုလည်း မည်သူကမျှ ဒုက္ခမပေးနိုင်းခြင်း ဟူ၍လည်း မှတ်နိုင်ပါသည်။
၂) သန္တာသ– ကိုယ်စိတ်နျစ်ပါးပူလောင်မှုမှန်သမျှကိုလည်း ပယ်ဖျောက်ပေးသည်။ပါပေ၏။
၃) ဒုက္ခ– ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲမှန်သမျှကို ပယ်ဖျောက်တတ်ပါပေ၏။
၄) ဒုဂ္ဂတိ– အပါယ်ကျမယ့်ဘေးကိုလည်း ပယ်ဖျောက်စေတယ်။
၅) ပရိကိလေသ- ကိုယ်စိတ်ရဲ့ ညစ်နွမ်းမှု မှန်သမျှကိုလည်း ပယ်ဖျောက်စေတယ်။
သရဏဂုံတည်ခြင်းကြောင့် ရမည့် အဆစ် ၈ မျိုး
၁) အများရဲ့ အပူဇော်ခံရပါတယ်။
၃) ဖြစ်လာရာဘ၀မှာ သူ့အလိုကို အားလုံးက လိုက်ရပါတယ်။
၄) ဖြစ်ရာဘ၀မှာ ဘုံပုဂ္ဂိုလ်တွေက သူ့ကို ချစ်ခင်ကြတယ်၊ နှစ်သက်ကြတယ်။
၅) ရွှေအဆင်း လို လှပကြတယ်။
ဆရာကြီးဦးရွှေအောင်က ထေရ၀ါဒအုတ်မြစ်ကျမ်းစာ စာမျက်နှာ ၆၄ မှာ –
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဟူသော ရတနာသုံးပါးသည် ဤလောက၌ အပူဇော်ခံသက်သက်အနေဖြင့် ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာသည်မဟုတ်။
ဘုရားဟောတော်မူသည့်အတိုင်း ယုံကြည်စွာလိုက်နာကျင့်သုံး၍ အနိမ့်ဆုံးအနေဖြင့် ကလျာဏပုထုဇဉ်ဖြစ်သွားအောင်။ ထို့ထက်စွမ်းနိုင်ပါက မဂ်ဖိုလ်ကိုရသွားအောင် ကျင့်ကြံအားထုတ်စေရန်အတွက်သာ ဖြစ်၏။ ထိုမှသာ ဤလောက၌ ရတနာသုံးပါး ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရကျိုးနပ်ပေလိမ့်မည်။
အညွန်း- မိရိုးဖလာနှင့် တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာ စာအုပ်၊ အရှူံးမရှိသော ဒဿနစာအုပ်၊ မြန်မာတို့၏အသက် စာအုပ်၊ အတွင်းရန်သူစာအုပ်၊ ဆရာကြီးဦးရွှေအောင်က ထေရ၀ါဒအုတ်မြစ်ကျမ်းစာ၊ မျက်ရည်မကျခင် သိစေချင် စာအုပ်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ၃၁ ဘုံ